स्कूले विद्यार्थीलाई 'क्यानस्याट' प्रशिक्षण | RevoScience Nepali
सरकारले विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकेन–पूर्व विज्ञानमन्त्री गणेश साह
राय स्कूलको २०औ वार्षिक उत्सवमा न्यासनल सायन्स ओलम्पियाड विजयी बराल पुरस्कृत
वाल्मिकी विद्यापीठलाई एक थान टेलिस्कोप हस्तानतरण
जैविक प्रविधिमा एक दिने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी
प्रयोगात्मक विज्ञान शिक्षा विकासका लागि हरेक वर्ष प्रर्दशनी गर्दैछौं
गणितज्ञलाई चिड्याउँदै शिक्षा मन्त्री
वायुमण्डलीय अध्ययन् गर्ने निर्माणाधीन नारेल आवासीय भवनको शिक्षा मन्त्रीद्वारा शिलान्यास
नास्टद्वारा वैज्ञानिकहरुलाई सम्मान, कुलमान घिसिङलाई प्रविधि पुरस्कार (पूर्ण विवरणसमेत)
अव नेवापसको आफ्नै भवन
सातौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड-२०२०को लोगो सार्वजनिक
Home /स्कूले विद्यार्थीलाई ‘क्यानस्याट’ प्रशिक्षण
आवरणOctober 2, 2019
स्कूले विद्यार्थीलाई ‘क्यानस्याट’ प्रशिक्षण
काठमाडौं । वृहस्पती विद्या सदनका विद्यार्थीलाई दुई दिने ‘क्यानस्याट’ प्रशिक्षण दिइएको छ । कक्षा ८, ९ र १० का उनाइस विद्यार्थीलाई ‘क्यानस्याट’ निर्माण प्रक्रिया सिकाइएको प्रशिक्षक इन्जिनियर राजेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार तालिमले नेपालमै क्यान आकारको ‘स्याटलाइट’ बनाइको हो । नमूना आकारको भएपनि यसले तापक्रम, वायुमण्डलीय चाप, आद्रत, गति र उचाइ नाप्ने काम गर्दछ ।
प्रशिक्षक श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा विद्यालय तहदेखि क्यानस्याट निर्माण तालिममा सहभागी गराइरहेका हुन्छन् । युरोपीयन अन्तरिक्ष संस्थाले क्यानस्याट नमूना बनाउने प्रतिस्पर्धालाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसखाले प्रतिस्पर्धा गराइएको छैन । ‘सरकारी तवरबाट सहयोग पनि छैन,’ प्रशिक्षक श्रेष्ठ भन्छन् ।
तालिमका बेला विद्यार्थीले ‘इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट’लाई जडान गर्छन । त्यसपछि क्यानस्याटलाई विद्यालयको माथिल्लो तल्लाबाट प्लास्टिको प्यारासुटको सहायताबाट जमिनमा खसालिन्छ । माथिबाट तलतिर आउँदा त्यसमा जडित सेन्सरले वायुमण्डलीय गतिविधिको तथ्यांक संकलन गर्दछ । त्यसपछि तथ्याकंलाई प्रशोधन गरि विद्यार्थीले प्रस्तुती दिनु पर्नेछ इ. श्रेष्ठ भन्छन् । इ. श्रेष्ठका अनुसार नमूनाभूउपग्रह ‘क्यानस्याट’ तालिमले इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर, प्रोगामिक र सेन्सरजस्ता कुरामा विद्यार्थीले प्रत्येक्ष सिक्नेछ ।
विहस्पतीमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत ऋगा शर्मा भविष्यमा वकिल अध्ययन गर्ने मुडमा छिन्, तैपनि उत्सुकताले क्यानस्याटको नमूना बनाउन दुई दिनदेखि लागि परेको बताइन् । विद्यार्थी शर्मा भन्छिन्, ‘तालिममा सहभागी भएर आफूले स्याटलाइटको बारेमा विस्तृत कुरा थाहा पाएँ ।’ त्यसबाहेक ‘वायुमण्डलीय अवस्थितिका बारेमा जान्ने मौका मिलेको उनी बताउँछिन् । उनले बनाएको क्यानस्याटमा ‘गाइरोस्कोप’ जडान गरिएको छ । त्यसले स्पेश अर्थात् वायुमण्डलमा क्यानस्याटले अक्षांसको दिशानिर्देश गर्ने काम गर्नेछ ।
कक्षा १० का आयुष मालाकार पनि क्यानस्याट बनाउँदै थिए । मालाकारले बनाएको ‘क्यानस्याट’ले चाप, गति, आद्रता र तापक्रम मापन गर्ने सेन्सर जोडिएको छ । मालाकार भन्छन्, ‘यो पटक क्यानस्याटको नमूना बनाउँन साँढे एक दिन लाग्यो । तर यसअघि दुई दिन लागेको थियो ।’ भविष्यमा कम्पूटर इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य बोकेका मालाकार, ‘क्यानस्याट बनाउने तालिममा सहभागी हुँदा आफूलाई छुट्टै मज्जा आउने बताउँछन् ।
कक्षा दशमा अध्ययनरत सुलभ पौडेलले पनि क्यानस्याट बनाए । भविष्यमा इलोक्ट्रोेनिक इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य लिएका पौडेल, ‘विद्यालय तहमै क्यानस्याट बनाउने विधि सिक्न पाउँदा खुशी देखिन्थें । अघिल्लो वर्षको तालिममा एउटा मात्र सेन्सर जडान गरेर तथ्यांक संकलन गरेका थिए उनले । पौडेल भन्छन्, ‘तीन वटा सेन्सर क्यानस्याटमा जडान गर्दाको अनुभवले थप कुरा थाहा पाइयो ।’
क्याथफोड इन्जिनियरिङ कलेजमा चौथो वर्षमा अध्ययनरत सुमनरत्न बुद्धचार्य विद्यार्थीलाई क्यानस्याट बनाउन मद्दत गर्दै थिए । कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै गरेका बुद्धाचार्य भन्छन्, ‘क्यानस्याट बनाउने तरिका इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रमा समावेश छैन, तर रुचीले स्वअध्ययनमा लागेको बताउँछन् । ‘दुई वर्ष अगाडि इन्जिनियर आभाष मास्केसँग प्रशिक्षण लिएको आधारमा काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
विद्यार्थीहरुमा ‘स्पेश टेक्नोलजी’मा रुची देखाएका छन् । सरकारले स्याटलाइटको महत्व र त्यसबाट मानिसले दैनिक जीवनमा फाइदा लिनसक्ने छन् । त्यसका लागि सरकारले विद्यार्थीलाई तालिम दिन पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने बुद्धचार्यले बताए ।
सरकारले विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात गर्न…
राय स्कूलको २०औ वार्षिक उत्सवमा…
वाल्मिकी विद्यापीठलाई एक थान टेलिस्कोप…
जैविक प्रविधिमा एक दिने अन्तर्राष्ट्रिय…
प्रयोगात्मक विज्ञान शिक्षा विकासका लागि…
वायुमण्डलीय अध्ययन् गर्ने निर्माणाधीन नारेल…
नास्टद्वारा वैज्ञानिकहरुलाई सम्मान, कुलमान घिसिङलाई…
सातौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड-२०२०को लोगो…
विश्वका १० उच्च हिमालहरु
विश्वका १० उच्च हिमालहरु मध्य ८ वटा नेपालमा पर्दछन् । बाँकी दुई वटा पाकिस्तानमा पर्दछ । ती हिमालहरुका उचाई र नामाकरण समेटिएको छोटो भिडियो ।https://revoscience.com/np/2019/11/24/21742
Posted by RevoScience Nepali on Saturday, November 23, 2019
वैज्ञानिकहरू गैंडाको उत्पत्ति १ करोड ५० लाख वर्षअघि भएको अनुमान गर्छन् । विश्वमा पाँच प्रजातीका गैंडा पाइन्छ—सेतो, कालो, सुमात्रान गैंडा, जावान गैंडा र एक सिंगे गैंडा । सन् १९५० अघि नेपालमा हजारभन्दा बढी एक सिंगे गैंडा थिए । सन् २०१८ को गणनाअनुसार नेपालमा ६४५ एक सिंगे गैंडा छन् ।https://revoscience.com/np/2019/11/27/21818
Posted by RevoScience Nepali on Wednesday, November 27, 2019